Izindaba - UJilin Yuantong Mining Co., Ltd. ubambe iqhaza engqungqutheleni ye-2020 China Non-metallic Mineral Industry
UJilin Yuantong Mining Co., Ltd. ubambe iqhaza engqungqutheleni ye-2020 China Non-metallic Mineral Industry
Ingqungquthela ye- "2020 China Non-Metallic Mineral Industry Conference and Exhibition Expo" ebibanjwe yiChina Non-metallic Mineral Industry Association ibibanjelwe eZhengzhou, eHenan kusukela ngoNovemba 11 kuya ku-12. Ngokwesimemo seChina Non-Metal Mining Industry Association, iphini lemenenja jikelele yenkampani yethu uZhang Xiangting kanye nemenenja yesifunda uMa Xiaojie bathamele le ngqungquthela. Le ngqungquthela ibibanjwe ngesikhathi esibalulekile empini yesizwe yokulwa nobhubhane lomqhele olusha. Ngengqikimba “yokwakha amafomethi amasha amabhizinisi nokuhlanganiswa kumjikelezo ombaxambili”, ingqungquthela ifingqe isipiliyoni kanye nezimpumelelo zokuthuthukiswa komkhakha wezimayini wezwe lakithi kanye nempumelelo, futhi yaxoxa ngemboni yezimayini engeyona yensimbi yezwe lami esizayo Ukuthuthukiswa kwamasu nokuma kwamasu, kanye ukuphumelela kokuphikisana okukhulu nezinkinga ezivelele embonini. Ikakhulu, isimo samanje nentuthuko yomkhakha wezimayini okungewona owensimbi ngaphansi kwalesi sifo, kuhlangene nesimo sezomnotho ezweni lakithi selokhu kwaba nobhadane, senza ucwaningo olunzulu nezingxoxo, futhi saphakamisa ukunqoba "impi yokuvikela nokulawula "futhi wenze iminikelo emisha nemikhulu ekufezekisweni kwezinjongo zeqhinga likazwelonke.
Abaholi boMnyango Wezimboni Nobuchwepheshe Bolwazi, uMnyango Wezendalo, uMnyango Wezokuphathwa Kwentela kanye neChina Building Materials Federation banikeze izinkulumo eziqavile ngokulandelana kwazo. Emhlanganweni, amayunithi angu-18 avela emikhakheni ehlobene ezweni lonke anikeze izinkulumo nokushintshana esithangamini. Ngokwamalungiselelo omhlangano, uZhang Xiangting, iphini lemenenja jikelele wenkampani yethu, wenze umbiko onesihloko esithi "Ukuthuthukiswa kwemikhiqizo emisha ye-diatomite kanye nenqubekela phambili yokufaka izicelo emikhakheni ehlobene" egameni lenkampani yethu, wabeka imibono emisha nezindlela ezintsha zenkampani yethu kulo mkhakha. Ngokubona izinzuzo zomkhakha wenkampani yethu kanye nesikhundla esivelele ekucutshungulweni okujulile kwe-diatomite, izivakashi zancoma kakhulu.
Le ngqungquthela iphinde yamemezela abawine i- "2020 China Non-metallic Mineral Science and Technology Award" futhi yabaklomelisa.
Ingqungquthela ibiphethwe nguPan Donghui, uMongameli weChina Non-Metal Mining Association. Abamele amalungu abavela ezimbonini ezingezona ezensimbi ezihlobene nezimayini ezifana neChina University of Mining and Technology, Chinese Academy of Geological Sciences, kanye nezivakashi ezivela ezikhungweni zocwaningo lwesayensi bebehambele le ngqungquthela.